Wararka Maanta: Talaado, Aug 7 , 2018-Madaxweynaha Hirshabelle oo la kulmay Taliyaha guud ee AMISOM
Talaado, August, 07, 2018 (HOL)– Madaxweynaha Dowladda Hirshabelle Dr Maxamed Cabdi Waare, ayaa maanta Qasriga Madaxtooyada Magaalada Jowhar ku qaabilay Taliyaha Ciidamadda Midowga Africa ee AMISOM Sarreeye guud Jim Beesigye Oweyesigire oo maanta soo gaaray Magaalada Jowhar isaga iyo saraakiil sar sare oo ka tirsan AMISOM.
Waxana kulanka ku wehelinayey Madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen, iyo saraakiil ka tirsan AMISOM, Iyadoo ay ka wada hadleen ammaanka guud ee dalka gaar ahaan Amniga Hirshabelle iyo sidii loo dar-dar gelin lahaa howlgalada lagu baacsanayo kooxaha argagixisada ah islamarkaana loo furi lahaa wadooyinka kala xiran.
Taliyaha Ciidanka AMISOM Sarreeye Guud Jim Beesigye Oweyesigire ayaa Madaxweyne Waare iyo ku xigeenkiisa war-bixin ka siiyey shaqooyinka ciidammada AMISOM ay ka wadaan guud ahaan Soomaaliya iyo doorka ay ku leeyihiin xasilinta dalka, dhismaha iyo taakuleynta ciidammada Qaranka, iyo qorshaha ay ku doonayaan in Hirshabelle ay uga fuliyaan howlgalada looga xoreynayo kooxaha ka soo horjeeda dowladda.
Kulankan ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray muhiimada ay leedahay in Amniga guud ee Dalka ay la wareegaan ciidamada Qaranka loona diyaariyo qorsha sahlaya in laga gudbo xiliga kala guurka, waxaana Madaxweyne Waare uu carabka ku adkeeyay in si adag loo wajaho qorshaha lagula dagaalamayo Argagaxisada oo aynan dowladda iyo AMISOM noqonin kuwa difaac uun ku jira laakiin loo baahan-yahay in noqdaan kuwa baacsada kooxahaasi.
“Aad ayaan u bogaadinayaa ciidammadeena iyo kuwa Midowga Afrika ee howlgallada socda ka qeyb qaadanayaa. Howlgaladan waa kuwa loogu talagaley in muddo aad u yar dalka oo dhan looga sifeeyo cadowga gaar ahaan waxaa dhowaan bilaabanaya Howlgalo lagu Baacsanayo kooxda Al Shabaab si loo furo wadooyinka kala xiran ee Hirshabelle ayuu yiri Madaxweyne Waare.